April | 2020 | Lost Sheep for Christ | Page 4
Ir Dievas pamatė, kad tai buvo gerai DIEVO MEILĖ VISATAI Aaronas Juozapas Hackett | Teologija | 2020 04 14
Dievas padarė ką nors iš nieko Iš Katalikų Bažnyčios CCC 27 Katekizmo puslapių puslapių „ Dievo troškimas yra užrašytas žmogaus širdyje, nes žmogus yra Dievo sukurtas ir Dievo; ir Dievas niekada nenustoja traukti žmogaus prie savęs. Tik Dieve jis ras tiesą ir laimę, kurios niekada nenustoja ieškoti: Žmogaus orumas visų pirma priklauso nuo to, kad jis yra pašauktas bendrauti su Dievu. Šis kvietimas kalbėtis […]
At nakita ng Diyos na ito ay mabuti PAG-IBIG NG DIYOS PARA SA SANSINUKOB Aaron Joseph Hackett | Teolohiya | 04/14/2020
May ginawa ang Diyos mula sa wala Mula sa mga pahina ng mga pahina ng The Catechism of the Catholic Church CCC 27 ” Ang hangarin sa Diyos ay nakasulat sa puso ng tao, sapagkat ang tao ay nilikha ng Diyos at para sa Diyos; at ang Diyos ay hindi tumitigil upang iguhit ang tao sa kanyang sarili. Sa Diyos lamang […]
Ug nakita sa Dios nga kini maayo GUGMA SA DIYOS ALANG SA UNIBERSO Aaron Joseph Hackett | Teolohiya | 04/14/2020
Gibuhat sa Dios ang bisan unsa gikan sa wala Gikan sa mga panid sa mga panid sa The Catechism of the Catholic Church CCC 27 ” Ang tinguha sa Dios nasulat sa kasingkasing sa tawo, tungod kay ang tawo gibuhat sa Dios ug alang sa Diyos; ug ang Diyos wala mohunong sa pagdani sa tawo sa iyang kaugalingon. Sa Dios lamang […]
Dan Tuhan melihat bahawa itu baik CINTA TUHAN TERHADAP ALAM SEMESTA Aaron Joseph Hackett | Teologi | 04/14/2020
Tuhan menjadikan sesuatu dari sia-sia Dari halaman halaman The Catechism of the Catholic Church CCC 27 “ Keinginan untuk Tuhan tertulis di hati manusia, kerana manusia diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan; dan Tuhan tidak pernah berhenti menarik manusia untuk dirinya sendiri. Hanya di dalam Tuhan dia akan menemukan kebenaran dan kebahagiaan yang tidak pernah dia berhenti mencari: Maruah manusia terletak […]
Бурхан үүнийг сайн харсан ОРЧЛОН ЕРТӨНЦИЙГ ХАЙРЛАХ БУРХАНЫ ХАЙР Аарон Иосеф Хакетт | Теологи | 04/14/2020-ны өдөр
Бурхан юу ч үгүй ​​зүйлийг бүтээсэн Католик Сүмийн Катехизийн CCC 27- ийн хуудсуудаас “ Бурханыг хүсэх нь хүний ​​зүрхэнд бичигдсэн байдаг, учир нь хүн бурхан болон Бурханы төлөө бүтээгдсэн; Бурхан хүнийг өөр рүү нь татахыг хэзээ ч үгүй ​​болгодог. Зөвхөн Бурханд л тэр үнэн мөн аз жаргалыг олох болно. Хүний нэр төр хамгийн түрүүнд түүнийг Бурхантай эвлэрэхэд дуудагддаг. Бурхантай ярилцах энэхүү урилгыг […]
ဘုရားသခင်သည်ဘာတစ်ခုမှမရှိသောအရာမှဖန်ဆင်းခဲ့သည် ကက်သလစ်ချာ့ချ် CCC ၂၇ ၏ကက်သလစ်ဘာသာ၏ စာမျက်နှာများမှစာမျက်နှာများမှ “ ဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်အလိုဆန္ဒသည်လူ့နှလုံးသား၌ရေးထားသည်။ ဘုရားသခင်သည်လူကိုမိမိထံသို့သွေးဆောင်တော်မမူ။ ဘုရားသခင်၌သာသူသည်ရှာဖွေခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သောအမှန်တရားနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်။ လူသား၏ဂုဏ်သိက္ခာသည်သူနှင့်ဘုရားသခင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ရန်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့်စကားပြောဆိုရန်ဤဖိတ်ကြားချက်သည်လူဖြစ်လာသောအခါလူကိုရည်ညွှန်းသည်။ အကြောင်းမူကားလူသည်တည်ရှိလျှင်၊ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုချစ်ခြင်းအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ။ ၊ သူသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလွတ်လပ်စွာအသိအမှတ်ပြုပြီးမိမိကိုဖန်တီးသူအားအပ်နှင်းထားခြင်းမရှိလျှင်အမှန်တရားနှင့်အပြည့်အဝမနေထိုင်နိုင်ပါ ။ ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးနှင့်အတူဤချိုမြိန်မှုကိုမျှဝေလိုသောအတိုင်းအဆမဲ့တန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်အားညီအစ်ကို၊ သူပေးထားသောနို့နှင့်ပျားရည်တွင်ပျော်မွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှ ပို၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးအခွင့်ထူးခံကြသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမဖန်ဆင်းမီကမ္ဘာကြီးသည်အလွန်ကျယ်ဝန်းသည် ။ ကျွန်ုပ်၏လက်ရာဆရာအဖြစ်ကျွန်ုပ် ကိုယ်တိုင် အသိအမှတ်ပြုထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်အား အရာရာကိုတည်ရှိနေစေ ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောသတ္တဝါသည်အဘယ်မှ စ၍ သိနိုင်မည်နည်း။ သူဘယ်လိုလုပ်ဖို့နို့နည်းလမ်းများဘယ်လောက်သိခဲ့တာလဲ ကမ္ဘာကြီးကိုရေနဲ့ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ။ နေနှင့်လကိုဖန်တီးသလား။ ဒါကဘာမျှမဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြပါဘူး။ မည်သည့်အရာကမိမိကိုယ်ကိုမည်သို့ဖန်တီးနိုင်မည်မဟုတ်သနည်း။ အဆိုပါသူ၏အရေးအသားထံမှ St. Thomas Aquinas အမည်ရှိလိပ်စာဤကိစ္စကို Summa Theologiae Art.1, Obj 1 ” ဒါဟာရန်ပုံပဲ ဖန်တီးဘာမျှမှတစုံတခုကိုလုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ သြဂတ်စတင်းအဘို့ဤသို့ဆို၏ -“ လုံးဝမတည်ရှိခဲ့ရာများကိုစိုးရိမ်ပူပန်စေရန်; ဒါပေမယ့်ဖန်တီးမှုဆိုတာဟာပြီးသားအရာတစ်ခုခုထဲကနေထုတ်ယူခြင်းအားဖြင့်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင်ပင်အိပ်မက်မြင်နိုင်သည်ထက် ပို၍ ကြီးမြတ်သောအရာတစ်ခုကိုဘုရားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူဖန်တီးခဲ့သောကောင်းကင်တမန်များသည်ထိုအလှတရားကိုနားလည်နိုင်သည်။ ဤမျှလှပသောကမ္ဘာကြီးကိုရှာဖွေပြီးစကြဝtheာကိုဖန်တီးသူကိုကြားခြင်း၏အံ့“ ဖွယ်ရာ “ ပြီးတော့သူကကောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်”! “ ကောင်းသည် ” ဟုစ ကြာ ၀ iverseာ၏အရှင်သခင် ဟုဘုရားသခင်ပြောခြင်း၏အရေးပါမှု သည်မစုံလင်သောအရာများကိုမပြုလုပ်ပါ၊ မည်သည့်“ ကျန်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများ” မှမျှမပြုလုပ်ပါ။ ဂျေရုဆလင်ပြင်ပတွင်ရိတ်သိမ်းသောသံလွင်ပင်မှအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပတ် ၀ န်းကျင်ရှိဂျဗာပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှသင်ဖမ်းမိသောငါးများ၊ ရိယတ်မြို့ကြီးအပြင်ဘက်တွင်သင်စိုက်ပျိုးသောကောက်ပဲသီးနှံများ ကိုပြုလုပ်သည်။ ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်၌စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ အဘို့အ ပင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကယောဘကလညျး, ပညာမရှိဘဲစကားပြောကာမျှနှင့်ငါ့အကြံကိုမိုက်စေသောဤသူကားအဘယ်သူနည်း။ လူယောက်ျားကဲ့သို့သင်၏ခါးကိုစည်းလော့။ ငါမေးမြန်းသောပြyouနာတို့ကိုဖြေလော့။ မြေကြီးအမြစ်ကိုငါတည်သောအခါ၊ သင်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။ နားလည်လျှင်ဘော်ပြလော့။ မည်သူတိုင်းတာသည်ကိုတိုင်းတာသည်ကိုသင်မည်သူသေချာသိသနည်း။ သို့မဟုတ်သူကအပေါ်မျဉ်းကိုဆန့်? နံနက်ကြယ်တို့သည်တညီတညွတ်တည်း သီချင်းဆို၍၊ ဘုရားသခင်သားအပေါင်းတို့သည်ဝမ်းမြောက်သဖြင့်၊ ကြွေးကြော် ကြစဉ် ၊ တိုက်ထောင့်အထွ what်ဖျား သို့အဘယ်သူတက် သနည်း။ သမုဒ္ဒရာ သည်အမိဝမ်းထဲကဘွား။ ထွက်လာသောအခါ ၊ အဘယ်သူသည်တံခါးပိတ်နှင့်ပိတ်ထားသနည်း ။ ငါမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးသည်၎င်း၏အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း, လုပ်သည့်အခါ များနှင့်ထူထပ်သောမှောင်မိုက်သည်၎င်း၏ swaddling တီးဝိုင်း, ဒါကြောင့်အဘို့သတ်မှတ်ဘောငျ, နှင့်အစုအရက်ဆိုင်များနှင့်တံခါးများ, က, ” ဤရွေ့ကား, သငျသညျ လာ. , အဘယ်သူမျှမဝေးတဲ့, ဒီမှာသင်၏ထောင်လွှားသောလှိုင်းတံပိုးတည်းခိုခံရကြလိမ့်မည် ”? […]
परमेश्वरले यो देख्नु भयो कि यो राम्रो थियो ब्रह्माण्डको लागि भगवानको प्रेम हारून यूसुफ Hackett | धर्मशास्त्र | ०//१//२०२०
परमेश्वरले कुनै चीजबाट केही बनाउनु भएन क्याथोलिक चर्च सीसीसीको क्याटेकिजमको पृष्ठका पृष्ठहरूबाट २ God “ ईश्वरको अभिलाषा मानव हृदयमा लेखिएको छ किनकि मानिस परमेश्वर र परमेश्वरबाट सृष्टि गरिएको हो; र मानिस आफैंमा आफैंलाई आकर्षण गर्न कहिल्यै रोक्दैन। केवल भगवानमा उसले सत्य र खुशी पाउन सक्दछ उसले खोज्न कहिल्यै रोक्दैन: मानिसको मर्यादा सबैभन्दा माथि छ कि उहाँ परमेश्वर संग कुराकानी गर्न बोलाइएको छ। परमेश्वरसँग कुराकानी […]
04/14/2020 خدای د هیڅ شي څخه یو څه جوړ کړ د کاتولیک کلیسا د کیتیکزم د پا pagesو پا Fromو څخه CCC 27 ” د خدای لپاره ارمان د انسان په زړه کې لیکل شوی ، ځکه چې انسان د خدای او خدای لخوا رامینځته شوی دی؛ او خدای هیڅکله د انسان ځان ته راجذبولو ته نه پریږدي. یوازې په خدای کې به […]
I Bóg widział, że to było dobre BOŻA MIŁOŚĆ DO WSZECHŚWIATA Aaron Joseph Hackett | Teologia | 14.04.2020
Bóg stworzył coś z niczego Ze stron kart Katechizmu Kościoła Katolickiego CCC 27 „ Pragnienie Boga jest zapisane w ludzkim sercu, ponieważ człowiek jest stworzony przez Boga i dla Boga; i Bóg nigdy nie przestaje przyciągać człowieka do siebie. Tylko w Bogu odnajdzie prawdę i szczęście, którego nigdy nie przestaje szukać: Godność człowieka opiera się przede wszystkim na tym, że jest […]
E Deus viu que era bom O AMOR DE DEUS PELO UNIVERSO Aaron Joseph Hackett | teologia | 14/04/2020
Deus criou algo do nada Nas páginas das páginas de O Catecismo da Igreja Católica CCC 27 “ O desejo de Deus está escrito no coração humano, porque o homem é criado por Deusepor Deus;eDeus nunca cessa de atrair o homem para si mesmo. Somente em Deus ele encontraráaverdadeea felicidade que nunca deixa […]